[Review – Trích dẫn] Bên Nhau Trọn Đời – Cố Mạn | Anybook.vn - Anybook
[Review – Trích dẫn] Bên Nhau Trọn Đời – Cố Mạn | Anybook.vn
Ahoana no hamaritana ny fitiavana? Hoy ny olona iray: “Ny fitiavana olona iray dia 30 segondra eo ho eo, ny fotoana sisa dia ny mahatsapa ny fihetseham-ponao”. Ny fananana anao dia olona tsara vintana rehefa mora fantatra fa voatohina izy, fa maro ny olona tsy maintsy mandalo dia lavitra, mandalo ny faniriana, ny halavirana ary ny fijaliana eo amin’ny saina sy ny fihetseham-po, vao tena mahatsapa izany. tsy afaka miaina tsy misy olona. Toy izany koa i Trieu Mac Shenh sy Ha Di Tham ao amin’ny “Together for life”.
Ny fitiavana eo amin’i Di Tham sy Mo Sheng dia toy ny lakroa misy loko maro: taloha sy ankehitriny; fahatsiarovana mahafinaritra sy maharary lalina; mifikitra sy mangatsiaka… Ha Di Tham dia manana fon’ny lehilahy Capricorne – mangatsiaka be, misaina, tanjona; ary Trieu Mo Sheng, rehefa niantso azy hoe “Ny masoandroko” i Di Tham, dia tsy afa-nanoatra aho fa tsy nieritreritra tovovavy Aries manana tsiky masoandro sy toetra mahafinaritra.
Araka ny nosoratan’i Gu Man: “Betsaka ny tantaram-pitiavana eo amin’ny fiainana, fa ny tena sambatra dia mbola mifampitantana mandra-pahatongan’ny lohany.” Capricorn sy Aries, famantarana ny tany, famantarana afo, fa ao anatin’ny korontana eo amin’ny fiainana, raha sendra sendra sendra izy ireo dia hiaraka mandrakizay. Farafaharatsiny, efa nanaporofo izany koa ny « Miara-miaina » !
Fihaonana kisendrasendra, mahafantatra ny fomba hamihina sy hankamamy – izany no anjara
Ny sarin’i Ha Di Tham mijoro eo anilan’ny hazo, ao anatin’ny tara-masoandro mamiratra, dia voasokitra ao an-tsain’i Mo Sheng hatramin’ny nihaonany voalohany. Tahaka ny fomba nisarika ny lehilahy Capricorn ny tovovavy Aries amin’ny endriny mistery, mangina ary matotra. Arakaraka ny maha-sarotra sy tsy miraharaha ny Capricorn, dia ho liana kokoa ny vehivavy Aries ary handroso. Ary avy eo dia tsy maintsy nanao veloma an’i Trieu Mac Senh fetsifetsy sy tsy miraharaha i Ha Di Tham. Satria rehefa nanandratra ny lohany izy, “nahita ny tara-masoandro nandihy teo amin’ny tarehiny, dia tena nihantsy izany, nanerana ny efitrano fianarana… nivantana tao am-pony tsy nisy fanontaniana, tsy nanam-potoana handà akory izy. Izy no hany tara-masoandro teo amin’ny fiainany manjombona.” Ny tovovavy iray izay tsy heverina ho tsara tarehy loatra na manan-talenta fa mahasarika ny fon’ny Andrianan’ny Lalàna dia sarotra takatry ny olona maro. I Di Tham mihitsy no nieritreritra izany tatỳ aoriana, satria nihevitra foana izy fa tsy ho lavo atsy ho atsy, fa…
Tsy maninona fa jereo ny fifankatiavan’izy ireo fa fitiavana tena izy, mampihetsi-po ary tena izy. Ny lehilahy Capricorn dia matetika misaina be, mody tsy miraharaha, fa raha ny marina dia manahy ny amin’ny olon-tiany izy ireo, saingy efa zatra ny toetrany matotra izy ireo, ka na dia asehony aza izany, dia somary henjana ihany koa izany ahiahy izany. Indraindray dia lasa mahasarika manokana. Tsy mahagaga raha i Ha Di Tham dia eo an-tampon’ireo lehilahy malaza indrindra amin’ny tantaram-pitiavana. Iza no tsy tia ny manana lehilahy matotra sy tena mikarakara eo anilany, sa tsy izany?
Raha ny momba an’i Mo Sheng, heveriko fa tsy tovovavy Aries tsotra izany, nanao ny lehilahy mangatsiaka sy maina izy “mitsiky amin’ny tsiky marina amin’ny roapolo taonany”?
Na dia manelingelina ny lehilahy Capricorn aza ny toetra tsy miahiahy amin’ny vehivavy Aries, dia izy no hitarika ny lehilahy Capricorn ho any amin’ny tontolon’ny nofy, mampiseho azy ny fomba hitiavana.
READ [Review – Trích dẫn] Mình Buồn Đủ Rồi, Mình Hạnh Phúc Thôi! – Trí | Anybook.vn
Teo amin’ny fiainanao, firy ny olona nandalo teo amin’ny fiainanao? Firy ny olona nanatanteraka ny andraikiny, avy eo lasa haingana – toy ny tsipika izay mifampitohy indray mandeha ihany ary avy eo dia lasa mandrakizay? Raha “betsaka” ny valiny dia andramo kely saintsaino hoe efa nanandrana nitazona azy ireo ve ianao?
Misy nostalgia mifamatotra amin’ny fotoana lavitra
“Nifankahita tamin’i Ha Di Tham indray i Trieu Mac Shenh toy ny sitrapon’Andriamanitra. Taorian’ny 7 taona nandaozany azy, dia izao izy roa lahy dia mifampijery toy ny olon-tsy fantatra.
Amin’ny fitiavana dia maro ny miantso ny fisarahana ho karazana fahasambarana, fa raha Capricorn sy Aries dia fampijaliana mampahory.
Aries dia manana fo mavitrika, tanora ary mitady fahafinaretana sy fikatsahana foana, ary ry zalahy Capricorn toa an’i Di Tham, dia manana fahamatorana sy azo ampiharina. Raha miaraka izy ireo dia ho falifaly sy falifaly foana – mifanaraka amin’ny olona iray mametraka fanontaniana, ny iray kosa mamaly.
Mo Sheng sy Di Tham – inona no tsy maintsy niaretan’ireo olona roa ireo nandritra ireo taona maro nisarahana ireo: nanodidina ny fanahin’i Di Tham ny matoatoa tamin’ny lasa, ny zava-misy henjana dia nanasaraka ny fo kelin’i Mo Sheng tsy hahita fitiavana. Nifamonjena, fatiantoka jamba sy tsy misy fetra: nijaly sy tapa-kevitra ny nandao rehefa resy lahatra foana fa tsy diso izy; Ireo izay mijanona dia tafaroboka ao anatin’ny fiandrasana mampahory ny fiainana ary tsy azo fafana ny fahatsapana ho nafoy.
“Di Tham, malahelo anao loatra aho…
Malahelo anao aho! Di Tham, fantatrao ve? Nijoro irery teo amin’ny arabe hafahafa tany an-tany hafa aho taloha, nandalo teo anoloan’ny masoko ny olona samy hafa loko hoditra, na dia endrika toa anao aza tsy hita.
Ny fo tsy miraharaha sy tsy manan-tsiny an’i Mo Sheng, manoloana ny fangirifiriana toy izany, ho lasa tsy misy dikany ve izany? Ny ankizivavy Aries dia somary zaza sy tsy manam-paharetana, saingy mbola manana toetra tena matanjaka izy ireo, ampy ve izany hanampy an’i Mo Sheng handresy ny tafio-drivotra?
“Ny fanaintainana dia ny fahatsapana mahatsiravina amin’ny fahabangana rehefa mifoha ianao ary mahatsiaro fa lasa ianao, tsy afaka mahita ny tsiky fahazazanao intsony. Fahadisoam-panantenana tsy mitombina izany rehefa manao na inona na inona. Ny fanirery foana aorian’ny fialamboly mitabataba isaky ny mankalaza ny fandresen’ny raharaha.”
Ny fanaintainan’ny lehilahy Capricorn dia naratra mafy tamin’ny fitiavana. Mitondra ny toetran’ny famantarana ny Tany – tony, firindrana ary fisainana, fa mijoro eo anoloan’ny varavarana sarotra antsoina hoe “fihetseham-po”, ahoana no tokony hataon’i Di Tham?
Fifandirana eo amin’ny saina sy ny fihetseham-po
Azonao isaina ve, impiry i Di Tham no tsy maintsy nisalasala, nisalasala ary niady tamin’ny fihetseham-pony? Impiry ianao no tsy nahatana ny fanaintainana mafy izay nangovitra tao am-ponao? Izany koa no fijaliana izay tsy maintsy iaretan’ny zanak’i Capricorn foana rehefa tojo fisarahana amin’ny fitiavana. Raha olon-kafa ilay izy, angamba dia hivily fotsiny izy ireo, na hanamaivana ny fihetseham-pony, na hamela ny alahelony ho any amin’ny rivotra, ho vonona amin’ny fanombohana vaovao.
Ha Di Tham anefa io zanany io, tsy misy afa-tsy tara-pahazavana tokana ny fiainany, raha tsy ho azy intsony, tsy azy intsony, dia… inona no dikan’izao andro tsy misy ilana azy izao? ? Izany no nahatonga azy nihevitra fa tena tia tena i Mo Sheng, niteraka korontana ary niala tamin’ny tsy fandraisana andraikitra nefa tsy nahalala izay ho vokany.
READ [Review – Trích dẫn – Tóm tắt] Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao – John Green | Anybook.vn
Tsy haiko izay hevitrareo, fa heveriko fa ireo fijaliana ireo, ireo ratra lalina ao amin’ny fon’i Di Tham izay mitomany isaky ny fikapohana malemy, dia tsy ho afaka hampitony, raha tsy noho i Zhao Mo Sheng. . Nahoana? Satria izy no “tsy firaharahiana, tsy misy antony, tsy misy objectivity” an’i Di Tham izay mila mihaona indray, “hiova daholo ny foto-kevitr’i Ha Di Tham”. Tahaka ny fomba nahatongavany, nitondra an’i Di Tham tsiky, fahazarana adaladala mahafatifaty izay sarotra hialana, rehefa niverina izy ireo, dia nifankahita indray izy roa, fo roa maty no nafana kokoa noho ny taloha.
Mety hieritreritra ianao fa amin’ny tena fiainana dia sarotra be ny mahita Ha Di Tham toy izany, tsy haiko, fa farafaharatsiny, miaina tsy misy ahiahy sy fitiavana amin’ny fombanao manokana tahaka an’ilay ramatoa Mac Sheng. Tiako foana ny ankizivavy Aries, manana ny toetrany mijery azy ireo fotsiny izy ireo, manana hery mamiratra, tena voajanahary ary rustic. Ho an’ny lehilahy Capricorn, ho azy ireo, dia manana karazana fahatsapana ho fanajana sy fankasitrahana be aho. Talohan’izay dia tsy nieritreritra mihitsy aho hoe mety hifanaraka amin’ny tsirairay ireo olona roa samy hafa, toetra ary lalina ara-panahy ireo, raha tsy nihaona tamin’i Ha Di Tham sy Trieu Mac Sen tao amin’ny fiainana “Totally Together”.
Nomen’izy ireo ahy ny famaritana ny toerana misy ny fitiavana marina sy ny fitomaniana maro, nampahatsiahy ahy izy ireo hoe: tiavo ary aza matahotra ny hifamela raha mbola mifankatia ianareo. Angamba ela be tatỳ aoriana, rehefa manana olona eo anilako mandritra ny androm-piainako aho, dia mbola haniry hahita azy ireo indray. Tsarovy fa misy tolakandro mahafinaritra izay niainan’ny tsirairay farafahakeliny indray mandeha tamin’ny fahatanorany:
“Tolakandro izay mbola namirapiratra toy ny teo aloha ihany ny masoandro, teo amin’ny lalana aloky ny fofon-javamaniry manjavozavo, teo amin’ny sisin-dalana dia nahitana taratry ny aloka telo lava… Ny toetr’andro tsara tarehy, mety hivoaka, mety haka sary, mety… mandritra ny androm-piainany miaraka.
Tsy mpankafy tantaram-pitiavana sinoa aho na ilay antsoina matetika hoe tantara cheesy sinoa, fa ny tsy adala akory tsy midika fa tsy mamaky azy ireo aho. Noho izany, ankoatry ny boky sasany efa novakiako hatry ny ela ary ankoatry ny “Daty tsara tarehy toy ny nofinofy”, “Andao hiara-manoratra ny tantarantsika”, ny iray farany holazaina dia ny “Together for life” nataon’i Co Man. Tokony ho efa novakiana hatry ny ela io tantara io ary efa ela no nizarana anao ny fahatsapana momba azy. Sa ve satria lasa nangatsiaka tampoka ny toetr’andro tao Da Nang androany, nirohotra nankao amin’ilay efitrano tery feno loko hazo sy boky ny ravinkazo mavo, nahatonga ahy hanoratra io hatsiaka io. Na dia fantatro aza, any amin’ny toerana iray ato anatiko, dia misy sombintsombiny fotsiny, na dia miezaka mafy aza aho hamerina azy ireo, dia sombintsombiny fotsiny.
Tantara iray mihodinkodina amin’ireo mpilalao fototra roa Di Tham sy Mo Sheng ny “Together for life”. Tsy maintsy nifankatia izy ireo. Ary tena mifankatia izy ireo. Fa fisarahana voalamina nefa tsy nisy nampoizina no nitranga, ilay tovovavy Mac Shenh dia nentin-drainy tany Etazonia ary io dia lavitra io koa dia fotoana iray hialana amin’ny lozam-pitiavana tapaka; ary i Di Tham, rehefa avy nikaroka foana, dia nitsoaka ihany koa, namolavola akorandriaka mangatsiaka sy masiaka ary nihidy tao anatiny. Ny fisarahana dia maharitra ho an’ny vavolombelona rehetra, anisan’izany ireo voarohirohy, saingy ny fony dia tsy mamela ny hafa hiala mihitsy. 7 taona, Mo Sheng dia mbola miaina ao am-pon’i Di Tham toy ny tamin’ny taom-pianarana, ny andro nanenjika azy toy ny saka manenjika aloky ny tsinontsinona. 7 taona, tany amin’ny tany hafahafa, Di Tham dia mbola ilay fitiavana voalohany mamy miaraka amin’ny antsy maranitra misy ao amin’ny fanahin’ilay tovovavy tsy manan-tsiny sy tsy mampidi-doza Mo Sheng. Ary nahoana ny fitantarana fisarahana no mitondra ny lohateny hoe “Miara-miaina”? Mifankahita indray izy ireo ao amin’ny tanàna iasan’izy roa tonta, izay tsy maintsy niatrehan’izy ireo ny fivoarana sy ny fiovana. Ny ranomandry nandritra ny 7 taona dia nitsonika tsikelikely, ny fanatonan’ny fo taloha dia nampiray ny olona roa. Ny “Together for Life” dia manomboka amin’ny fihaonana aorian’ny 7 taona ary ny toko tsirairay dia mifamatotra amin’ny tselatra, izay mamaha ny olana. Ary nisy fahagagana nitranga rehefa nifampirohotra ny olona roa mba hanonerana ny fandriky ny alahelo noho ny fitiavana lalina izay noheverina fa tsy ho afaka hitambatra intsony noho ny ratra tao am-pony. Ny antony nandaozan’i Mo Sheng an’i Di Tham dia ny anabaviny Di Van. Ary tao anatin’ny taona maro ihany koa no nahatsapan’i Di Van fa tsy nanadino an’i Mo Sheng mihitsy ny rahalahiny nanangana azy. Nilavo lefona i Di Van satria tsy azy ny anjaran’i Di Tham. Raha ny momba an’i Mo Sheng, ny fotoana dia vokatra azo avy amin’ny fanampin’ny tsiron-tsakafony. Ny lehilahy miavaka dia tsy misy dikany raha oharina amin’ny lehilahy tiany. Ny fitiavana dia tena zava-dehibe.
READ [Review – Trích dẫn] Bộ Bộ Kinh Tâm – Đồng Hoa | Anybook.vn
Hisy fitiavana folo taona ve? Hiverina hifampitady ve rehefa lasa lavitra? Hanomboka indray ve ny fitiavana aorian’ny fisarahana? Nino aho taloha, tsy nino, ary izao aho dia resy lahatra indray, farafaharatsiny amin’ny zava-misy manjavozavo izay noforonin’ny “Together for Life”.
Ara-dalàna ny tantara, ara-dalàna ny fiteny, fa angano, tsy ampoizina ary tantaram-pitiavana ny toe-javatra na dia napetraka amin’ny hamafiny aza. Asa mora avadika ho tantara mitohy amin’ny fahitalavitra noho ny fandaminana mazava.
Tiako ny toetran’i Mo Sheng satria toa tena misy kokoa noho i Di Tham izy. Ankoatra izany, tiako ny fijery tsy misy dikany, tso-po, tsy manan-tsiny an’io tovovavy io. Fo tsy manan-tsiny no naratra, saingy taorian’izany fisavoritahana rehetra izany dia mbola noforonin’i Mo Shenh tsy nahy ho azy ny fandosirana malefaka. angano ve izany? Tsy tena izy ve? Sa ny finoana ny fisian’ny tovovavy toy izany eto amin’izao tontolo izao no mahatonga ahy ho tia azy mihoatra noho ny toetra hafa. Sa izaho koa ve naive? Avy eo moa ve ny ankizivavy toa an’i Mo Sheng afaka miaina “Miara-miaina” miaraka amin’ilay olona mahatonga ny fony ho tia sy handratra? Ho faly ve ny ankizivavy toa an’i Mo Sheng? Manana fanontaniana toa ahy ve ianao? Ndao isika hitady ny “Together for life”, okay!
Previous: Top 99 Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Ba, Bố Hay Và ý Nghĩa Nhất | Anybook.vn
Next: Bí kíp tuyệt vời để làm chủ kỹ năng gõ 10 ngón nhanh nhất | Anybook.vn